ASUS Transform Mini dia efa azo alefa mialoha | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | | takela-bato, telephony
ASUS dia manohy eo an-tampon'ny hazakazaka aminy mba handray ny tsenan'ireo azo ovaina. Ireo fitaovana izay sady tsy takelaka no tsy PC (izy roa ireo) dia manjary malaza toy ny foam. Hany ka lasa tsena mahomby kokoa amin'ny resaka varotra izy ireo noho ny fivarotana PC aza, ary eo amin'ny sehatry ny PC, indrindra ny solosaina finday, ny ASUS dia orinasa manana asa mendrika. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia efa aleony mihinana atiny noho ny mamorona azy, izany no mahatonga ireo fitaovana ireo hahatratra trano maro kokoa, tsy misy faneriterena hampiato ny fivarotana. Holazainay aminao kely momba ity ASUS Transofrom Mini mora vidy ity miaraka amin'ny fitaovana tsara.
Marina fa tsy vanim-potoanan'ny takelaka, fa tsy vanim-potoanan'ny PC, fantatr'i Intel tsara izany, izay nanapoaka ampahany lehibe tamin'ny mpiasan'ny asany noho ny fihenan'ny famokarana. Ny olona dia mankeny amin'ireto 2 amin'ny 1 ireto mba hanao asa an-trano voalohany ary ambonin'izany rehetra izany dia mihinana tsara ny atiny. 700 grama fotsiny ity fitaovana ity, zavatra miantso ny fividiananao tsy misy isalasalana, miresaka momba ny lanjany tanteraka amin'ny kitendry namboarina izahay. Miaraka amin'ny efijery mirefy 10,1-inch miavaka, tsy misy vahaolana afa-tsy 1280 × 800 io, fa ampy ho an'ny vidiny sy ny tanjon'ny mpampiasa ihany.
Hanasongadina ny Intel Cherri TRail, ny x5-z8350 tena mahery vaika, ary mety ho an'ny asa ankapobeny ihany, aza manontany be loatra momba izany. Hanana RAM 4GB sy 128GB fitehirizana tanteraka, zavatra tsy manahy noho ny fanitarana azy amin'ny microSD sy ny USB mahazatra ananany (tsy misy USB-C). Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny fitaovana dia manana stilosy izay ho tafiditra ao anaty boaty. Ny sensor sensor dia napetraka ao aoriana ihany, ao anaty vatana mihosin-aluminium izay manome fahatsapana fikitikitihana mahatalanjona. Ho an'ny € 400 eo ho eo fotsiny. Azonao atao izao ny mitahiry azy amin'ny Amazon USA (afaka iray volana any Espana) tsy misy daty fanaterana tombanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » ASUS Transform Mini dia azo alefa mialoha
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Amazon Music Unlimited